Mid ka mid ah wargeysadda Sucuudiga oo qoray in la dilay soomaali ka bar-bar dagaalamaysay xuutiyiinta Yemen – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Mid ka mid ah wargeysadda Sucuudiga oo qoray in la dilay soomaali ka bar-bar dagaalamaysay xuutiyiinta Yemen
Wargeyska Asharqal-awsad oo ka mid ah jaraa’idka ugu akhriska badan dalka Sacuudiga ayaa maanta qoray in dad u dhashay Soomaali ay xilal sare ka haayaan kooxda maleeshiyadda xuutiyiinta ee Yemen.
Axmed Al-dabxaani oo ka tirsan ciidanka qaranka Yeman ayaa u sheegay wargeyska inay 2 dagaalyahan oo Soomaali ah ku dileen iska-horimaad ay dagaalamayaasha xuutiyiinta kula galeen tuuladda Al-sayaar oo hoos taga degmada Al-salwa ee duuleedka magaalada Ticis, waa sida uu hadalka u dhigay.
Wuxuu Axmed Al-dabxaani sidoo kale sheegay in ciidanka labo goobood kula dagaalameen maleeshiyada xuutiyiinta, kana dileen tobaneeyo maleeshiyo oo 2 ka mid ay Soomaali ahaayeen.
Dhinaca kale, madaxweyne C/rabu Mansuur Haadi waxa uu shirweynihii ugu dambeeyey golaha guud ee Qaramada Midoobay ka sheegay inay gacanta ku dhigeen caruur Soomaali ah oo ka barbar dagaalamaysay kooxda xuutiyiinta ku kacsan dowladiisa.
Waxa uu madaxweyne Haadi intaasi ku daray in caruurtaasi ay geeyeen xarumaha dhaqan-celinta, si loo dhiso mustaqbalkooda.
Sidoo kale, boqolaal kun oo ka mid ah qaxootiyada Soomaali ayaa weli ku nool dalka Yemen, kuwaasi oo badankooda ku go’doomay dagaalada ka socda dalkaasi.
Hay’adda caalamiga ee muhaajiriinta ee IOM-ta oo kaashanayso xarunta boqor Salmaan-ka Sacuudiga ee samafalka iyo adeega aadanaha ayaa bilaabay qorshe dib loogu soo celinayo qoysaska Soomaalida ee weli ku xayiran dalka Yemen.
Waxaa dufcadii ugu horeyesay lagu soo daad-gureeyey markab kasoo shiraacday dekedda magaalada Sanca, kaasi oo la filaayo inuu kusoo xirto dekedda magaalada Bosaaso.
Qoysaskaasi ee ku xayiran dalka Yemen ayaa la filayaa in duulimaadyo diyaaradeed lagu soo qaado, kuwaasi oo laga soo dejin doono garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaaada Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, ma ma ahan markii ugu horeeysay ee ay warbaahinta shaaciyeen inay muwaadiniin Soomaali ah ku biireen maleeshiyadda xuutiyiinta ee ka dagaalanta gudaha dalka Yemen.